Global Voices teny Malagasy » Ginea: miaramila nijoro vavolombelona tamin’ny famonoana ny 28 septambra tao Conakry · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2009 0:06 GMT 1	 · Mpanoratra Claire Ulrich Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Ginea, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Zon'olombelona
Ity resadresaka teto ambany ity dia fijoroana vavolombelona nataona miaramila Gineana iray nandray anjara tamin'ny famoretana ny fihetsiketsehana nataon'ny mpanohitra tany Conakry , any Ginea , tamin'ny 28 Septambra 2009. Noraisimpeo tamin'ny alalan'ny antso an-tsofindavitra ary navoakan'ilay mpanao gazety frantsay Olivier Rogez tao amin'ny Radio France Internationale tamin'ny voalohany Oktobra 2009, roa andro taorian'ny fandripahana tao Conakry, ary mivoaka amin'ny teny frantsay tao amin'ny vohikan'ny RFI .
Nijoro vavolombelona rehefa tsy lazaina ny anarany ity miaramila ity, saingy fantatra sy iantohan'ny solontenan'ny RFI any Afrika Andrefana kosa ny anarana sy ny asany. Hatramin'izay dia nohamarinin'ny loharanombaovao maro  sy fijoroana vavolombelona ny fisian'ny famoretana sy ny fanolanana faobe. Na eo aza izany dia vaovao mivaingana maneho ny toeran'ny tafika Gineana, ny fisian'ny miaramila vahiny ao anatiny ity fijoroana vavolombelona iray ity, ary efa nahatsinjo ihany koa ny adim-pahefana tao anatin'ny tafika Gineana izay nipongatra tamin'ny 7 Oktobra  [fr].
Nanaiky ny handikan'ny Global Voices ny voasoratra sy ny famoahana ity resadresaka manan-tompo [copyright] ity ny Radio France Internationale ho antontan-taratasy hiarovana ny zon'olombelona ary hamoaka ny dikany amin'ny teny anglisy eo amin'ny vohikalany [ka azo avoaka teny malagasy ve?].
Olivier Rogez (Radio France Internationale): Miaramila avy amin'ny BATA ianao, vondro-tafika mpilatsaka an'elon'aina, ary anisan'ireo miaramila nandrava ny fihetsiketsehana tamin'ny 28 septambra.
Miaramila : Voalazanao, anisan'ireo nandrava ny fihetsiketsehana nisiana ra mandriaka tao amin'ny kianjan'ny 28 Septambra aho;
RFI : Ny tiako anontaniana anao voalohany, araka ny vaovao niely nandritra andro vitsivitsy izao, nanatri-maso ny tifitra tamin'ny bala tena izy ve ianao sy ny fanolanana vehivavy araka ny fijoroana vavolombelona maro? Nanao izany zaatra izany tokoa ve ny mpiray tafika aminao avy ao amin'ny BATA?
Manamarina aho fanisy tokoa ny fanolanana sy ny tifitra tamin'ny bala tena izy.
Ny marainan'io andro [28 Sept] io, efa nahazo baiko manokana ve ianareo rehefa hanakana ny fihetsiketsehan'ny mpanohitra teo an-kianja?
Ny zandary aloha no niandraikitra azy, fa rehefa tsy nifanaraka tamin'ny mpanohitra ry zareo dia nahazo baiko izahay hanafay ny mpanohitra, izay lazain'ny lehibenay ho tsy voafehy. Dia nandeha tany izahay. Izaho koa izay anisan'ny miaramila. Tsy afa-mandà ny baiko hanaparitaka ny mpanohitra izahay, mba ho azon'izy ireo fa tokana ny fahefana misy eto Ginea ary manome lesona azy ireo. Maro loatra ny isan'ny faty ka tsy tambo isaina. Narary ny lohako, lazaiko anao fa tena fanina aho. Tany ho any amin'ny 160 na 180 tany ny isan'ny maty… Na izaho aza tsy afa-milaza aminao ny isany. Ary fantatro ihany koa fa nasaina naka ny faty izahay ny alin'ny alatsinainy [28 Sept]. 47 ny isan'ny nafenina, fa tsy azoko lazaina anao hoe taiza marina izany.
Nandray anajara tamin'ny fakana ny faty tany amin'ny tranoim-paty ve ianao?
Noterena ve ianao hanangona ny razana?
Tsy misy afa-mandà. Izay mandà dia maty.
Maty ve ianao raha vao mandà?
Nizarana basy sy bala izany ianareo?
Efa herinandro nialoha izahay no nizarana basy sy bala ary efa niatrana.
Herinandro ianareo no efa niatrana?
Rehefa nialazana ianareo hanaparitaka sy hanome lesona ny mpanohitra, nahazo baiko hamono ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitarika politika ve ianareo?
Tsia, tsy misy baiko hamono ny mpanohitra. Fa tsy maintsy manome lesona. Raha miteny aho hoe “manome lesona”, amin'ny fiteny miaramila dia fantatrao ny dikany!
Azonao azavaina bebe kokoa ve?
Manafay no dikan'izany fa tsy manao izay mahafaty, fa hampisehoana amin'izy ireo fa misy mitondra ny firenena. Izay no nolazaina anay.
Betsaka no nilaza taminay fa nisy ny fiaraha-nanao fanolanana faobe, ny daroka sy ny fanaovana an-keriny ny vehivavy tamin'ny basy. Azonao nofantarina ve ny vondro-tafika nisy ireo miaramila nanao izany?
Ry zalahy mpiambina ny filoha, rehefa somary nihemotra taoriandriana kokoa ny zandary. Tsy tamin'ny basy ihany, fa nisy tamin'ny vatan-kazo. Izay azo noraisina rehetra. Nisy aza tamin'ny alalan'ny daka!
ilaza ianao teo fa tsy afa-mandà hanaparitaka ny mpanohitra. Ahoana ny fihetse-ponao amin'izao fotoana izao [1 Okt]?
Tsy nahita tory aho hatry ny alatsinainy. tsy mety mahita tory aho. Mitamberina amiko hatrany ireo sary mampihoron-koditra, tifitra bala tena izy atohoka eo amin'ny… tsy mampahita tory. Manonofy ratsy aho. tsy mety mahita tory. (sento).
Namono daholo ve?
Izay no baiko andriamatoa : na mamono na vonoina.
Ianao koa, tsy maintsy namono ve ianao?
(fanginana) Sarotra ho ahy nyhamaly izany fanontaniana izany. Efa nilaza taminao aho fa na mamono na vonoina.
Avy any amin'ny ambaratongam-pahefana izany ny baiko?
Tsoriko aminao fa tsy misy ambaratongam-pahefana izany ao amin'ny tafika. Mandray ny baiko avy amin'ny rehetra ianao. Manome baiko avokoa ny rehetra, manome baiko avokoa. Tsy misy ambaratongam-pahefana eo amin'ny tafika Gineana. Manjaka ny korontana. Tahaka ny milisy voalamina. Efa ela izahay no tao amin'ny tafika fa mikorontana e! Raha tsy mamonjy anay ny fianakaviambe iraisam-pirenena dia manhy ny ho amin'ity firenena ity aho.
Lazaina betsaka ny fikorontanana misy eo amin'ny tafika. Azonao lazaina e ny momba izany? Ahoana ny fomba fiasan'ny BATA amin'izao fotoana izao? Nisy fandraisana zazavao e teo aloha teo? Misy milisy ve ao amin'ny BATA?
Eny, manamarina aho fa misy milisy ao anatin'ny BATA. Misy ny olona tonga tao. Misy aza milisy avy any Liberia no tafiditra ao anatin'ny tafika Gineana, ao anatin'ny BATA, tsy manana toe-tsaina miaramila, tsy nofanina ho amin'izany. Tena mpampono olona mihitsy ireo noraisina ireo. Lazaiko fa miaramila aho, miaramila aho fa manahy ny amin'ity firenena ity. Tsy amin'ny fisainana tahaka izao mihitsy no nandraisana ny fahefana. Noraisinay ny fahefana tsy hampivakivaky ny firenena, hanaovana azy ho andrin'ny demokrasia. Saingy tsy izany ankehitriny no mitranga eo amin'ny tafika Gineana. Tena mankaloiloy, manahy mihitsy aho. matahotra na dia izahay miaramila aza. 600 ankehitriny no nampidirna tao amin'ny tafika, misy ny avy any an'ala, misy ny avy any Liberia. Ahiana hatamin'ny valifaty.
Hatramin'ny oviana ianao no miaramila?
Hatramin'ny nahatafiditra anao tao amin'ny tafika, tao amin'ny BATA, nahita ny fitotongan'ny toe-draharaha ve ianao?
Miharatsy isan'andro isan'nadro ny toe-draharaha.
Mahazo fitaovam-piadiana ve ny zazavao? Nahazo fitaovam-piadiana vaovao ve ianareo? Betsaka ve ny fitaovam-piadiana nozaraina any an-toby?
Mivezivezy any an-toby isan'andro ny fitaovam-piadiana. Mahazo fitaovam-piadiana ireo vao zazavao. Omena azy ny rehetra: grenady, basy, bala. Tsy heverina ny andro nampidirana azy ireo (ao amin'ny tafika). Nozarina fotsiny dia aseho azy ny lalan'ny ady, izay ihany. Misy ny tanora vonona, ary tsoina fa ny hiaro ny fitondrana mijoro ihany no ataony, tsy manana fiofanana ara-miaramila. Mitady y fomba ijanonana eo amin'ny fitondrana ny ekipa misy ankehitriny. Tsy te-hiala teo amin'ny fitondrana izy. Tahaka ny filoha Conté. Ankehitriny vao tena miseho endrika izany sefo izany. Izahay koa dia voahilikilika ao amin'ny tafika. Feno tahotra, tsy afa-miteny. Lazaiko anao ny zavamisy ao amin'ny tafika amin'izao fotoana izao: Baranahiny tanteraka, baranahiny tanteraka, baranahiny tanteraka! Tsy misy mifankafantatra intsony ny ao ami'nny tafika ankehitriny. Tsy misy mahalala hoe iza no komandà ary iza no kaporaly. Nidaroka ny Jeneraly Toto ry zalahy tao amin'ny mpiambina ny filoha. Kaporaly ry zalahy ireo. Tsy misy fitsipi-pifehezana ao amin'ny tafika Gineana. Ao amin'io tafika io, rehefa tsy misy ny “hery vonjy taitra” dia lazaiko anao fa ho fanjakan'i baroa tanteraka i Ginea, ary ho avy amin'ny tobin'i Alpha Yaya (tobin'ny Kapiteny Camara) ihany no iavian'izany. Efa feno avokoa ny fepetra rehetra hisian'ny gidraka, akaiky dia akaiky, ao amin'ny tobin'i Alpha Yaya [ihany]. Tsoriko fa manahy indrindra ny ho amin'ity firenena ity aho.
Copyright : resadresak'i Olivier Rogez, Radio France Internationale
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/10/16/3875/
 famoretana ny fihetsiketsehana nataon'ny mpanohitra tany Conakry: https://globalvoicesonline.org/2009/10/02/guinea-outrage-grief-after-brutal-massacre/
 vohikan'ny RFI: http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_85209.asp
 nohamarinin'ny loharanombaovao maro: http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12502.doc.htm
 7 Oktobra: http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_85447.asp